ကျွန်ုပ်၏အတွေ့အကြုံမှအကြံပေးချက် - Long POST ALERT - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်порно
ပြောင်းလဲခြင်းသည် Tools များ: Porn စွဲကနေ Recovery ကို
Rebooting Advice & Observations: အောင်မြင်သော Rebooters မှ
ကြှနျတေျာ့အတှေ့အကွုံ [ကွာ POST ALERT] ထံမှအကြံဉာဏ်များ
ကြှနျတေျာ့အတှေ့အကွုံ [ကွာ POST ALERT] ကနေအကြံပြုခြင်း
မင်းကိုငါပြောပြချင်တဲ့ငါ့အတွေ့အကြုံကနေငါအများကြီးသင်ယူခဲ့တယ်။ ဒီအသိုင်းအဝိုင်းကငါ့ကိုအများကြီးကူညီခဲ့ပြီးငါတတ်နိုင်သမျှပြန်ပေးချင်တယ်။ ဒါဟာရှည်လျားတဲ့ပို့စ်တစ်ခုပါ။ ဒါကြောင့်တည်ငြိမ်အေးဆေးစွာနဲ့မနက်ဖြန်မရှိတဲ့အချိန်မှာစာဖတ်ပါ
ဦး ဆုံးအနေနှင့်၊ သင်ဘာမှမလုပ်မီသင်ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်အမှန်ပင်လိုအပ်သည် သင်အမှန်တကယ်တစ်ခုခုလုပ်ရန်သင်အမှန်တကယ်ဆုံးဖြတ်သောအခါ၊ တစ်ခုသည်အရာတစ်ခုကိုသင်အမှန်တကယ်စိတ်ထဲထားသောအခါ၊ ၎င်းသည်သင့်အတွက်ဘဝနှင့်သေခြင်းကိစ္စဖြစ်ပါကသင့်ရှေ့မှောက်အတားအဆီးအားလုံးကိုကျော်လွှားရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။ သင်ဘာလိုချင်သည်ကိုသင်သိပြီးသင်မည်သူဖြစ်လိုသည်မှာသင်မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းစွန့်လွှတ်ရန်ဆန္ဒရှိလျှင်သင်ဘာမျှမတားဆီးနိုင်ပါ။ မင်းရဲ့ဘဝကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်။ ပြီးရင်ဘာလုပ်ဖို့လိုသလဲ။ ရပ်တန့် MASTURBATING ၏ဆုံးဖြတ်ချက်လုပ်ပါ။ အဲဒါကိုကြေငြာချက်တစ်ခုအနေနဲ့လုပ်ပါ -“ ငါ dd-mm-yyyy ကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာကိုရပ်လိုက်ပြီးအဲဒီအချိန်ကစပြီးကျွန်တော့်ကိုအသစ်ပေါ်လာတာပိုကောင်းလာတယ်” ဒီကြေငြာချက်အတိုင်းနေထိုင်ပါ။ နေ့ရောညပါ ညများများပို
သင်မြင်သောသငျ့စိတျအရူးခွင့်ရှိမယ့်လှည့်ကွက်ပါတယ်။ သင်ထားပြီးစွဲတခုတခုအပေါ်မှာအဆုံးသွင်းထားသင့်ဦးနှောက်မှဟုနေကြသည်။ သင်ကဆိုလိုတကယ်ယုံကြည်စိတ်ချမှုနှင့်အမှန်တကယ်လျှင်သင့်ရဲ့စိတ်ကိုကယုံကြည်ပါလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကခြင်း, ကောင်းတဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ဤသူသည်သင်တို့အဘို့အကောင်းနဲ့အဆိုးရဲ့အဘယ်အရာကိုခွဲခြားရန်, ပိုကောင်းတဲ့လူတစ်ဦးသို့တက်ကြီးထွားဖို့သင့် TIME ဖြစ်သည်။ သင်သည်သင်၏အသက်တာကိုတိုးတက်စေရန်သို့မဟုတ်ဖျက်ဆီးဖို့ဖြစ်စေအချို့သောရွေးချယ်မှုလုပ်ဖို့ရှိသည်သည့်အခါအသက်တာ၌အချိန်လေးရှိပါတယ်။
ငါဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးပျက်ကွက်နေသူတွေကိုအရမ်းစိတ်မကောင်းပါဘူး။ ငါမင်းကိုတကယ်ကူညီချင်တယ် ဒါပေမယ့်သင်ကိုယ်တိုင်မကူညီဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ ငါတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုရပ်တန့်စေလိုသည့်အခါကျွန်ုပ်သည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကတိကဝတ်ပြုခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့နေထိုင်ခြင်းကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ခဲယဉ်းပေမဲ့ငါငရဲလိုမီးထဲလောင်နေရင်တောင်ငါဆက်လှုပ်ရှားနေတယ်။ ငါ့ပန်းတိုင်သိတယ် ပြီးတော့ဘာမှအရေးမကြီးဘူး။ ကျွန်တော်ဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုလူသစ်အဖြစ်မြင်ယောင်နေတုန်းပဲ၊ ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်ပြီးယုံကြည်ချင်တဲ့သူကအလုပ်ဖြစ်တယ်။
သင်ကဒီကိုဖတ်ခြင်းနှင့်အရာခပ်သိမ်းကိုထုတ်အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်ထင်ကြသလော သေချာတာပေါ့, သင်အထောက်အပံ့နှင့်အရာခပ်သိမ်းရလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်သင်အမှန်တကယ်ရပ်တန့်ဖို့မလိုချင်ကြဘူးလျှင်, သင်ကရပ်တန့်မည်မဟုတ်။ သင်သည်အခြားပါစေ, သို့မဟုတ်ကွိုးစားပါစေခြင်းငှါ, တဦးတည်းနှင့်သာကြိုးစားကြကဒီမှာငှါလာသလော ကိုယ့်ကိုကိုယ်မှမုသာမသုံးပါနဲ့။ သငျသညျဆုံးဖြတ်ပါဝါရှိသည်!
ကျွန်တော့်ကိုယုံပါ၊ ဘယ်အရာကမှမင်းရဲ့ဘဝကိုထိန်းချုပ်တာထက်ပိုပြီးလှပတာဘာမှမရှိဘူး။ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုရပ်တန့်ရန်ကျွန်ုပ်၏စိန်ခေါ်မှုကိုအောင်မြင်စွာမြင်တွေ့ရခြင်းကကျွန်တော့်ကိုအားရှိစေပြီးလှုံ့ဆော်မှုနှင့်မိမိကိုယ်ကိုလေးစားမှုကိုပေးခဲ့သည်။ သင်သိလား? တစ် ဦး စွဲတက်ပေးခြင်း? ဒါကတော်တော်ကြောက်စရာကောင်းတယ် တဖန်သင်တို့ပင်ပို။ ကြောက်မက်ဘွယ်အဘယ်အရာကိုသိ? သင်ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ပေးသည်ဟူသောအချက်။ ငါ့ဘဝမှာဘယ်သူမှမသိဘူး။ ဒါဟာကိုယ့်ငါနှင့်စွဲခဲ့သည်။ ငါလုပ်ပြီးသတ်ပစ်လိုက်ပြီ။ ရိုးရှင်းပါသည်။
အလုပ်များလူနေမှု Get သို့မဟုတ်အလုပ်များသေရ
ဆိုလိုတာကမင်းအလုပ်များနေရမယ်။ သင်၏စိတ်ကိုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုမစဉ်းစားပါနှင့်။ သင့်မှာနေထိုင်တဲ့ဘဝကိုနေထိုင်ပါ၊ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုမဖျက်ဆီးပါနဲ့။ သင်မကြာခဏပျင်းခံစားရ? ၎င်းသည်သင်၏စွဲလမ်းမှုနှင့်သင်၏ဘဝကိုအပြည့်အ ၀ မနေထိုင်နိုင်သည့်လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်၏ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များကိုသတ်မှတ်ရန်၊ သင်ဘာလိုချင်သည်ကိုသိရန်နှင့်၎င်းကိုလုပ်ဆောင်ရန်သင်လိုအပ်သည်။ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း၊ ရုပ်မြင်သံကြား၊ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်၊ yahoo၊ twitter၊ tumblr နှင့်ဤဂြိုဟ်ပေါ်တွင်သင်၏အချိန်ကိုအကျိုးရှိစွာအသုံးမပြုသည့်အခြားအရာများနှင့်ဝေးဝေးနေပါ။ ကွန်ပျူတာကိုအချိန်နည်းနည်းသုံးပြီးကိုယ့်ကိုကိုယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်အာရုံစိုက်ပါ။ စာအုပ်ကိုဖတ်ခြင်း၊ ကင်မရာဖြင့်ကောင်းသောပုံများပြုလုပ်ရန်သင်ယူခြင်း၊ ဘာသာစကားအသစ်သင်ယူခြင်း၊ ဂစ်တာသင်တန်းများ၊ ပုံဆွဲခြင်းသို့မဟုတ်ကခုန်ခြင်းစသည့်သင်၏ဘဝကိုတိုးတက်စေသည့်အရာများကိုစတင်လုပ်ဆောင်ပါ။ မင်းဘယ်လောက်ကြာကြာနေချင်ခဲ့ပေမယ့်မင်းမှာအချိန်မရှိခဲ့ဘူး။ သင်၏စိတ်ကိုကြည်လင်စေ။ ဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းစေသောအရာများကိုပြုလုပ်ပါ။ မင်းဘဝကိုရှင်သန်ဖို့လိုတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တိုတိုတိုတိုတိုတိုတိုတိုတိုတိုကိုသင်လိုက်နေမှသာမင်းနဲ့သင်ချစ်တဲ့သူတွေအတွက်အဓိပ္ပါယ်ရှိလိမ့်မယ်။
, အစစ်အမှန်ကမ္ဘာနှင့်အဆက်အသွယ်တည်းခိုသင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်အတူနေ့စဉ်ပြောနေတာနဲ့ကိုယ့်ကိုကိုယ်တိုးတက်အောင်အသစ်တစ်ခုနဲ့ပိုကောင်းတဲ့ဘဝအတှကျအခြို့သောရည်မှန်းချက်များ setting အလုပ်လုပ်ခဲယဉ်းကာလ၌သင့်ကိုကူညီတံ့သောအမှုအရာအချို့ရှိပါသည်။
အစပျိုး။ အဲဒါတွေကဘာလဲ? သင် porn ကိုစဉ်းစားစေသည့်ပြင်ပအချက်များဖြစ်ကြသည်။ porn, sex, or nudity နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာအားလုံးကိုငါအစပျိုးပေးတဲ့အရာတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ပါတယ်။ မိန်းကလေးတစ်ယောက် ၀ င်ပြီးမင်းကိုနှိုးဆွပေးတဲ့အရာအားလုံးကဒါကအစပျိုးတာပါ။ sexy ပုံပြင်များသို့မဟုတ် sexy မက်ဆေ့ခ်ျများပင်လျှင်သင်သည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်ကွန်ပျူတာ၏အစပျိုးမှုများနှင့်သာသက်ဆိုင်သည်။
ကျွန်မရဲ့မိဘတွေထွက်မသွားချင်ခဲ့တယ်အနေဖြင့်တဦးတည်းပုံမှန်နေ့ကငါကို web န်းကျင် browsing ခဲ့သည်။ ငါမသွားချင်ကြဘူး, ဒါကြောင့်ငါသည်ငါ့ပစ္စည်းပစ္စယလုပ်နေတာစောင့်ရှောက်လော့။ သူတို့ကတံခါးကိုပိတ်လိုက်အချိန်ကိုအသုံးပြုပုံတစ်ခုခုငါ့ဦးခေါင်းသည်ခုနှစ်နှိပ်လိုက်ရင်။ ရုတ်တရက်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေများအတွက်ကြီးမားသောအလိုဆန္ဒ, ငါ့စိတ်ထဲသို့တက် pop ။ ကျွန်မတံခါးအမိန့်အားဖြင့်ဖွင့်ခဲ့သည်။ ငါငါ့အဘို့အခြားခလုတ်ဖြစ်ပါတယ် "ဟုအဆိုပါမိဘများနေအိမ်စွန့်ခွာ" သဘောပေါက်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါသိသာခဲ့ပေမယ့်ငါနေတုန်းပဲဒါကြောင့်သတိထားမိခဲ့ပါဘူး။ ဒါကြောင့်, သငျသညျမွငျနိုငျအဖြစ်အစပျိုးခြင်းနေရာတိုင်းကျွန်တော်တို့ကိုလှည့်ပတ်ရှိပါတယ်, ငါတို့မသိစိတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာ၌စိုက်သောကြောင့်အစပျိုးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်ကဤအစပျိုးတွေ့ပါရန်နှင့်အသစ်သောအရာတစ်ခုခု, ငါတို့အသက်အဘို့အတန်ဖိုးရှိရှိတစ်ခုခုသူတို့နှင့်အတူနေရာတွင်အစားထိုးရန်ဖြစ်ပါသည်။ ကြှနျတေျာ့ဥပမာမှာငါခလုတ်သဘောပေါက်ယခုအချိန်တွင်ထံမှကျွန်မရဲ့ကွန်ပျူတာရပ်တန့်ခြင်းနှင့်အသုံးဝင်သောတစ်ခုခုကျွန်မရဲ့မိဘတွေအိမ်တော်ကို left အခါတိုင်းလုပ်ပေးမယ့်မိတ်ဆွေတစ်ဦးကိုခေါ်သို့မဟုတ်တစ်ဦးလမ်းလျှောက်ထွက်သွားပါလိမ့်မယ်။
ကွန်ပျူတာများအတွက်, ငါ "K9 Web ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး" ဟုခေါ်တဦးတည်းကြီးအပျော့ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ သင့်အနေဖြင့် web ပေါ်မှာအခမဲ့ကြောင့်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ငါသိတယ်တိုင်း porn စာမျက်နှာပိတ်ဆို့ပြီးတော့ကျွန်မစကားဝှကျကိုထားတော်မူ၏။ သင်တစ်ဦးစက္ကူပေါ်မှာအဲဒီစကားဝှက်ကိုကယ်တင်ပြီးဘေးကင်းလုံခြုံရာဌာန၌ထားကိုသင်မိတ်ဆွေတစ်ဦးကပေးနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံစောင့်ရှောက်ဖို့သူ့ကိုမေးနိုငျသညျ, သို့မဟုတျသငျရိုးရှင်းစွာကျပန်းစကားဝှက်ကိုထည့်သွင်းနိုင်နိုင်ပါတယ်။ ငါသည်သင်တို့ကိုပရိုဂရမ်ပိုင်ခွင့် setting များကိုဖန်ဆင်းတော်သာလျှင်နောက်ဆုံး option ကိုအကြံပြုလိမ့်မယ်။ အဆိုပါပျော့ may လုပ်ကွက် porn နှင့်ဆက်စပ်သောနှင့်သင်အမှန်တကယ်ကဖွင့်လှစ်ရန်ရှိသည်များနှင့် ... သင် fuck ဆိုတဲ့ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်ကြောင်းစာမျက်နှာ
ဒါကြောင့်သင်ကအလေ့အထကိုပြောင်းလဲပြုပါရန်ရှိသည်ဘာလဲ? ငါသည်သင်တို့ကိုသငျသညျကိုပြောင်းလဲပြီးတော့ကျနော်တို့ကပြဿနာပြန်လာကြလိမ့်မည်ချင်တိုင်းအလေ့အထအသုံးချနိုင်သည့်အထွေထွေမဟာဗျူဟာ, ငါပေးမည်။
ပထမ ဦး ဆုံးအရာအကြောင်းရင်းကိုရှာဖွေရန်ဖြစ်သည်။ သငျသညျနောက်ဆုံးအပိုင်း၌ပြု၏။ မေးခွန်း ၅ ခုသည်အလွန်အရေးကြီးပြီးအလွန်အထောက်အကူဖြစ်စေသည်။
ဒုတိယအ။ သငျသညျအလေ့အကျင့်စွဲလမ်းတဲ့စိတ်ကျေနပ်စရာသည်အဘယ်အရာထွက်ရှာရန်ရှိသည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးကြည့်ပါ: "အဘယ်အရာကိုတဏှာတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေကျေနပ်စရာဖြစ်ပါသည်ငါထင်ပါသလဲ အခြားဆုလာဘ်နှင့်အတူ "သန်းအစားထိုး။ အဲဒီအစား masturbating အခါသင်ရကြောင်းကိုသင်၏အော်ဂဇင်၏, ထိုအော်ဂဇင်ကိုအစားထိုးနိုင်မယ့်ဆုလာဘ်ရှိသည်သောအခြားအလေ့အထကိုရှာပါ။ ဥပမာအားဖြင့်, အစား masturbating ၏, သင်ကရွရွပြေးဘို့သွားပါ။ ကြောင်းတဏှာကုန်ပြီလော တစ်အော်ဂဇင်ကိုအစားထိုးရန်သင့်ကျန်းမာအလုံအလောက်လား? သင်တတ်ပြီးကျေနပ်ကြောင်းသစ်ကိုတစ်ခုခုရှာတွေ့သည်အထိစမ်းသပ်ထားပါ။
တတိယနှင့်နောက်ဆုံးခြေလှမ်းကိုသင်အကြောင်းမရှိနှင့်အကျိုးကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ကြပြီးနောက်, အသစ်သောလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ထည့်သွင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခုခုနဲ့တူ: "ရတဲ့အခါ (ဒီမှာအကြောင်းမရှိထား), ငါ (ဒီမှာလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ထား) မည်, ဒါကြောင့် (ဒီမှာဆုလာဘ်ထား) နဲ့ငါ့ကိုပေးစွမ်းလို့ပဲ။ "
ကြှနျတေျာ့အထူးသဖြင့်အမှုများအတွက်ကြေညာချက်ဤကဲ့သို့သောဝင်: "။ ငါအိမ်မှာတယောက်တည်းကျန်ရစ်သောတာလိုက်တဲ့အခါဒါဟာကျန်းမာတဲ့လူနေမှုပုံစံစတဲ့နှင့်ငါ့ကိုထောက်ပံ့သောကွောငျ့, ငါတစ်ရွရွပြေးသွားပါလိမ့်မယ်" သင်၏ကြေငြာအသံသငျ့သညျကိုဘယ်လိုဖွင့်ပါ။ တဦးတည်းအားပေးအသစ်တစ်ခုနှင့်အတူအဟောင်းအလေ့အထကိုအစားထိုးနှင့်သင်အောင်မြင်မှုရရန်သင့်လမ်းပေါ်ရှိလိမ့်မည်။
သင်တစ်ဦးအလေ့အထကိုပြောင်းလဲလိုလျှင်သင်ကိုယ်တိုင်ဖို့ကတိကဝတ်စေရန်ရှိသည်။ ပထမဦးဆုံးအ 21 ရက်ပေါင်းခဲယဉ်းပါလိမ့်မည်နှင့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်သည်နည်းနည်းရုန်းကန်ပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်အဆုံး၌အလေ့အကျင့်အလိုအလျှောက်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေရပ်တန့်များ၏စိန်ခေါ်မှုကိုငါတကယ်ဖြစ်ချင်သောလူတစ်ဦးဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်အတူတူငါ့အ shit get နဲ့ကျွန်မတတ်နိုင်သမျှအရာအားလုံးပြောင်းလဲပစ်ရန်, ငါ့အသက်ကိုနှင့်အတူမှားယွင်းနေသည်အဘယ်အရာကိုမြင်ရန်, re-အကဲဖြတ်ရန်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမှငါ့ကိုမကူညီပေးခဲ့သည်။
ငါတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ quitted တစ်ချိန်တည်းအသုံးပြုပုံငါသည်ကိုယ်အသက်ကိုလမ်းကြောင်းကိုပွနျလညျပွငျဆငျနှင့်အချိန်အတွက်အောင်မြင်သောအသက်တာကိုဦးတည်သွားစေပါလိမ့်မယ်အရာ ပို. အပြုသဘောဆောင်အလေ့အထရှိခြင်းစတင်ခဲ့သည်။ ငါကပိုယုံကြည်မှုအနိုင်ရလိုချင်နေသောကြောင့်တစ်ကြိမ်တစ်ဦးထက်ပိုအလေ့အထကိုအစားထိုးခြင်းနှင့်ရမ္မက်နည်းအားနည်းချက်ဖြစ်။ ငါ, ABS ယလေ့ကျင့်ခန်းရွရွပြေးဖတ်နေနေ့တိုင်းအသစ်သောအရာတစ်ခုခုကိုသင်ယူစတင် facebook ပေါ်မှာငါ့အချိန်လျှော့ချ။ ပစ္စည်းပစ္စယဒီလိုမျိုးငါ့ကိုအများကြီးကူညီပေးခဲ့သည်။ သငျသညျအောင်မြင်သောနေ့ချင်းညချင်းဖြစ်လာမပေးနိုငျသညျ။ အဲဒီမှာအောင်မြင်မှုအကြောင်းကိုစာဖြင့်ရေးသားစာအုပ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမယ့်အလွန်နည်းပါးသာယာသောသငျသညျအကောင်းတစ်ဦးစာအုပ်ဖတ်နေဖြစ်ကြောင်းခံစားမှုနှင့်သင့်အသက်ကိုမယ့်ကိုပြောင်းလဲဖို့အကြောင်းဖြစ်ပါသည်, အစိုင်အခဲရလဒ်များကိုအောင်မြင်ရန်ဖို့ဘယ်လိုရှင်းပြပါ။ ဒီလိုလုပ်ဖို့တစ်ခုမှာအကျိုးရှိစွာလမ်းသင့်ရဲ့အလေ့အကျင့်ကိုပြောင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ကာလ။
ငါစတင်ရက်စွဲကတည်းက4နှစ်ကြာခဲ့ညစ်ညမ်းငါ့စွဲနှင့် ပတ်သက်. ငါ၏အပြဿနာများသဘောပေါက်ငါ့လက်ကိုလှုပ်ခဲ့သည်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အကြှနျုပျ၏ကိုယျခန်ဓာအားနည်းခဲ့တယ်, ငါ့နေ့စဉ်စိတ်ဓါတ်များစိတ်ကျရောဂါကြီးနှင့်ငါ့ရေရှည်မှတ်ဉာဏ်နည်းနည်းထိခိုက်နစ်နာခဲ့သည်။ သူငယ်ချင်းတွေရဲ့မဟုတ်ခဲ့, ငါသည်အကောင်လေးတစ်ဦးစကားပြောအမျိုးအစားမဟုတ်ခဲ့, ငါ့လူမှုရေးဘဝကောင်းကောင်းမရှာခဲ့ပါဘူး။
ကျွန်မအဖြေကိုရှာဖွေနေစတင်ခဲ့ပြီးငါသည်ဤပြဿနာများ၏အများစုအလွန်အကျွံတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ၏ရလဒ်ဖြစ်ကြောင်းထွက်ရှာပါ။ ငါသည်ငါ့စွဲငါ့ကိုအစစ်အမှန်ကျန်းမာပြဿနာများဖြစ်ပေါ်စေကြောင်းသိနားလည်ကြ၏။ ထိုအခါငါပိုအရေးကြီးပါတယ်သောအရာကိုတစ်ဦး Self-ဖျက်ဆီးအလေ့အထတစ်ခုသို့မဟုတ်ကျန်းမာသောဘဝကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုတောင်းဆိုနေတာစတင်? ဒီအမေးရန်ထိုကဲ့သို့သောအစွမ်းထက်မေးခွန်းဖြစ်ပါသည်။ ငါကဒီမှာဖတ်နေရပ်တန့်, ကျေးဇူးပြု. အဖြေကိုဒုတိယတစ်ခုဖြစ်ပါသည်ယူဆပေမယ့်လျှင်မဟုတ်ပါဘူး။
ငါသည်သင်တို့၏ပြဿနာများကိုတွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာမသိရပါဘူး, ဒါပေမယ့်သူတို့ကိုသင်ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ ကုလားကာနောက်ကွယ်မှအမှန်တရားကိုကြည့်ပါ, ကိုယ့်ကိုယ်နှင့်အတူရိုးသားဖြစ်လိမ့်မည်။ သင့်ရဲ့ပြဿနာတွေအခုဘာတွေလဲတို့ကိုမည်မျှ porn စွဲ၏ရလဒ်ရှိပါသလဲ ဒါဟာသင်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေသင်၏အသက်ကိုထိခိုက်ပုံကိုနားလညျနိုငျသောအခါအယခုအချိန်တွင်ဖြစ်ပါတယ်။
ငါရှိခဲ့သောပြဿနာများကိုနားလည်သဘောပေါက်ပြီးနောက်အကျွန်ုပ်ကိုလွှတ်ရန်အဘို့အ, ကအများကြီးပိုမိုလွယ်ကူခဲ့ပါတယ်။ ငါသည်ငါ့ဘဝကိုပြောင်းလဲချင်ခဲ့တယ်ငါလုပ်ခဲ့တယ်သေချာခဲ့ပါတယ်။
သင်စိတ်ကူးစိတ်သန်းအကြောင်းကြားဖူးတယ်၊ တစ်ခုခုကိုလမ်း, ဒီစိတ်ဝင်စားဖို့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဓိကစိတ်ကူးဒေါက်တာအဆိုအရ။ Maltz Maxwell သည်ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်ဘ ၀ တွင်အဖြစ်မှန်နှင့်မကိုက်ညီဘဲကျွန်ုပ်တို့၏ဖြစ်တည်မှုပုံရိပ်နှင့်တုန့်ပြန်သည်။ ဒါ့ကြောင့်သင်စိတ်ကူးကြည့်ရုံဖြင့်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အဖြစ်မှန်ကိုဖန်တီးနိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်? သင်၏နိူင်ငံရေးစိတ်ဓာတ်ဖြစ်သောကြောင့်စစ်မှန်သောအဖြစ်အပျက်များနှင့်မြင်တွေ့ရသည့်မြင်ကွင်းအတွေ့အကြုံများအကြားကွဲပြားခြားနားမှုကိုမပြုလုပ်နိုင်ပါ။ ၎င်းသည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာအယူအဆဖြစ်သည်၊ ဤစာအုပ်၏အကြောင်းအရာကိုမဖန်တီးနိုင်သော်လည်းသင်ပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာလေ့လာလိုပေမည်၊ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်သင့်ဘ ၀ ကိုနည်းလမ်းများစွာဖြင့်တိုးတက်စေနိုင်သည့်စွမ်းအားအရှိဆုံးလျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ဒီတော့အမှတ်ကိုတောင်ကစတင်အလုပ်လုပ်သည်သင်၏မသိစိတ်တစ်ပိုင်းသတင်းအချက်အလက်များကို process ပါလိမ့်မယ်နှင့်သင့်ရည်မှန်းချက်ပြီးမြောက်၏အလုပ်သမားမှတဆင့်သင်ကူညီကြလိမ့်မည်ရှေ့တော်၌ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်ပြီးသားစိတ်ကူးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရက်ပေါင်း ၉၀ ကျော်ဖြတ်ကျော်ပြီးပြီးချင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ၊ ဘယ်လိုခံစားမှု၊ မင်းအတွက်တကယ့်ကိုတကယ့်အဖြစ်အပျက်လို့မြင်ယောင်ကြည့်လိုက်ပါ။ အသေးစိတ်ကိုစောင့်ကြည့်ပြီးစိတ်လှုပ်ရှားမှုများကိုခံစားပါ။ သင်၌ရှိသောနောက်ဆုံးရည်မှန်းချက်ကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ ငါယုံတယ်၊ ဒီဟာကြောက်စရာကောင်းတယ်၊ သင်၏ဘ ၀ သစ်သည်မည်သို့စတင်သည်၊ သင်၏ပျော်ရွှင်မှု၊ လုံ့လရှိမှုနှင့်ကျန်းမာခြင်းကိုသင်ခံစားရကြောင်းသတိပြုပါ။ မင်းလုပ်ခဲ့ပြီးပြီလို့ခံစားရပြီးငါကတိပေးလိုက်တယ်ဆိုတာမင်းကိုယ့်ကိုကိုယ်ပြောပါ။ ဒါကမင်းရဲ့လမ်းကြောင်းကိုပိုပြီးလွယ်ကူစေလိမ့်မယ်။
သင် porn မကြည့်ဖို့စဉ်းစားနေတယ်ဆိုရင်သင် porn ကိုစဉ်းစားနေတယ်။ porn သည်သင့်စိတ်ထဲတွင်ရှိနေပါက၎င်းကိုလွှတ်ရန်အခက်အခဲများစွာရှိလိမ့်မည်။ မှန်ကန်သောချဉ်းကပ်နည်းသည်ယင်းကိုမေ့လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ သင်ဘယ်နေ့ရက်ကိုရောက်နေပြီဆိုတာကိုမေ့ထားလိုက်ပါ။ “ OMG ရုပ်ပုံကိုဖြတ်ဖို့အရမ်းခက်ခဲတယ်၊ ကိုယ့် porn အကြောင်းကိုမေ့လျော့။ သင်၏ဘဝ၌၎င်းကိုရွေးချယ်ခွင့်အဖြစ်လျစ်လျူရှုပါ။ အပြောင်းအလဲလုပ်ကြရအောင် သင်မလိုချင်သောအရာကိုအာရုံစိုက်ခြင်းကိုရပ်တန့်ပါ။ သင်၏မိသားစု၊ သင်၏အိပ်မက်များ၊ ကျန်းမာရေး၊ အလုပ်အကိုင်။ မင်းရဲ့ရွေးချယ်မှုပဲ
တိုက်တွန်းမှုပေါ်ပေါက်လာသောအခါသူတို့ကိုသတိရှိရှိကြည့်ပါ။ သူတို့ကိုစောင့်ကြည့်ပါ။ မတုံ့ပြန်ပါနဲ့။ သူတို့ကိုဖိနှိပ်မထားပါနဲ့။ သူတို့ကိုမဖယ်ရှားပါနှင့်။ ကြင်နာစွာပြုံးပြီးသင့်စိတ်ကိုအခြားအရာတစ်ခုခုအပေါ်အာရုံစိုက်ပါ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်းသည်ရွေးချယ်စရာမဟုတ်ပါ။ ဒါဟာသင်၏အသက်တာ၏အစိတ်အပိုင်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာအတိတ်ကဖြစ်ရပ်တစ်ခုပါ
ငါကလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ခက်ခဲကြိုးစားခဲ့သည်ဟုဆိုကြှနျုပျ၏စိတျနှလုံးနှင့်အတူတိုက်ပွဲ, နောက်တဖန်အဘယ်သူမျှမထပ်ခါထပ်ခါဆိုသညျကား, ဒါပေမယ့်နေဆဲကလုပ်နေတာတက်အဆုံးသတ်နိုင်ပါတယ်။ ငါမကြိုးစားအားထုတ်မှုချပြီး start သောအခါငါဖြေလျော့ပေးခြင်းဖြစ်ခဲ့သည်အပေါင်းတို့နှင့်တကွမှာညစ်ညမ်းခြင်းမရှိဘဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်မြင်သောအခါသို့သော်, ကြီးမားတဲ့ခြားနားချက်, ငါ့သဘောထားကိုအတွက်ကြီးမားတဲ့အပြောင်းအလဲရှိခဲ့သည်။ သင့်ရဲ့စိတ်ကိုသင်၏နိုင်ငံသည်ဖြစ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်သင်၌ဖြစ်စေပြုလုပ်၏ထွက်ဝင်သော fuck ဆိုတဲ့အရာထိန်းချုပ်ရန်ပါဝါရှိသည်။
ထိပ်စိတ်ခွန်အားနိုးတပ်ဖွဲ့များတစ်ခုမှာပျော်မွေ့သည်။ ဤအပိုင်းကို၌ငါသင်သည်သင်၏စွဲတခုတခုအပေါ်မှာအဆုံးသွင်းထားလျှင်သင်ရရှိပါလိမ့်မယ်အဘယ်အရာကိုသင်ပြောပြလိမ့်မယ်။ အောက်ပါအတညျပွုနည်းနည်းပုံကြီးချဲ့အသံ, ဒါပေမယ့်အဲဒီမှာမဟုတ်ပေမည်။ ဤရွေ့ကားငါနှင့်ဤစိန်ခေါ်မှုအတွက်ဆက်ခံသူအခြားလူကြုံတွေ့ကြောင်းရလဒ်များကိုပြောင်းလဲနေတဲ့ဘဝတစ်ဦးစုဆောင်းမှုဖြစ်ကြသည်။ အဘယ်အရာကိုငါသည်သင်တို့ထံကအကျိုးရှိမည်ကိုအာမခံကြောင်းအရာတစ်ခုခုမဟုတ်ဘူး, ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့ရလဒ်တွေကိုဆင်တူဖြစ်လိမ့်မည်ကိုလိုက်နာပါလိမ့်မယ်။ ငါသည်အဦးဆုံးသောအကြိမ်ပစ္စည်းပစ္စယဒီလိုမျိုးကိုဖတ်ပြီးသောအခါငါယုံကြည်တယ်, ဒါပေမယ့်ငါလုံးဝကွဲပြားခြားနားသောအမြင်ရှိခဲ့ပါတယ်အောင်မြင်ခဲ့ပြီးနောက်လေ့မရှိ။
•အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမို၍ ပိုမို၍ ဂရုစိုက်ပါ
• erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုမှပြန်လည်ကောင်းမွန်
သင်၏အမြဲတမ်းအကြောင်းပြချက်အကြောင်းအနည်းငယ်ပြောကြပါစို့။ သင်ဤရိုးရှင်းသောကတိသစ္စာကိုပြောင်းလဲလျှင်သင်က“ ငါဒီအတိုင်းလုပ်မှာပါ၊ တစ်ကြိမ်လုပ်လိမ့်မည်” သို့မဟုတ်“ ဒီနေ့ကနောက်ဆုံးအချိန်ပဲ” ဟုဆင်ခြေအဖြစ်ဆက်ပြောနေလျှင်“ ဒီနေ့မလုပ်ဘူး” အာရုံပြောင်းဖို့ကြိုးစားပါ။ သင်၏အတွေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုသင့်မျက်နှာသာပေးပါ။ လူတို့အားသူတို့၏စိတ်ကိုပါ ၀ င်စေရန်ကူညီသည့်အနေဖြင့်“ ထာဝရသောက်ရန်ရပ်တန့်ရန်မကြိုးစားပါနှင့်” -“ ဒီနေ့ငါမသောက်ဘူး” ဟုသာပြောပါ။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်ခုခုကြားဖူးလားမကြားဖူးဘူး၊ ဒါပေမယ့်မင်းကမင်းရဲ့ဘဝအပေါ်ဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်တယ်ဆိုတာကိုမင်းရှင်းပြပေးဖို့ကြိုးစားပါ့မယ်။ ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပုံရိပ်ဟာမင်းရဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့ကန့်သတ်ချက်တွေရဲ့ပေါင်းလဒ်ဖြစ်တယ်။ သင်လုပ်နိုင်သည်၊ မလုပ်သည်ဟုထင်သည့်အရာအားလုံးသည်၎င်းသည် self-image နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ သင်ကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့နိုင်သည့်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ သင်၏လုပ်ရပ်များ၊ စိတ်ခံစားမှုများ၊ အပြုအမူများအားလုံးသည်သင်၏ပုံရိပ်ပေါ်တွင်အခြေခံသည်။ ဆိုလိုတာကသင်ဟာသင်ဟာစွဲလမ်းနေသူလို့ထင်ရင်ညစ်ညမ်းမှုကိုအနှေးနဲ့အမြန်ပြန်လာနိုင်မယ့်နည်းလမ်းတစ်ခုထက်ပိုပြီးရှာတွေ့လိမ့်မယ်။ အဖြေမှာဤအတွေးကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်ဖြစ်သည်။ မင်းဟာလွတ်လပ်တယ်လို့မင်းထင်ဖို့၊ မင်းဆိုးဝါးတဲ့စက်ဝိုင်းကနေလွတ်မြောက်ပြီးသင်မှာပြaနာမရှိတော့ဘူးလို့ခံစားရတယ်။ သငျသညျအလုံအလောက်စိတ်ရှည်လျှင်, ဤသည်သင်၏အသစ်အဖြစ်မှန်ဖြစ်လာသည်။ “ ကျွန်ုပ်အခမဲ့”၊ “ ကျွန်ုပ်ပျောက်ကင်းသွားပြီ”၊ “ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်ကိုတကယ် ချစ်၍ လက်ခံသောဘဝသစ်ရှိသည်” ကဲ့သို့သော Auto-အကြံပြုချက်များကိုနံနက်စောစောတွင်စတင်ရန်ကြိုဆိုသည်။ ဤကုသမှုလုပ်ငန်းစဉ်၌ကျွန်ုပ်တို့၏အကြံအစည်များသည်မည်မျှအရေးကြီးကြောင်းနှင့်အစွမ်းထက်ကြောင်းကျွန်ုပ်လုံလောက်စွာအလေးထား။ မရပါ။ သင်ထင်သည့်အတိုင်းသင်ဖြစ်လာလိမ့်မည် အောင်မြင်မှုဆိုတာစိတ်အခြေအနေတစ်ခုပါပဲ။ ဒီစိတ်အခြေအနေကိုကြိုးစားပြီးငါကတိပေးတယ်။ မင်းဟာအကောင်းဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်။
တိုင်းဆုံးဖြတ်ချက်သင်သည်သင်တို့၏အကြံအစည်နှင့်အတူစတင်ပါစေ။ သင်တို့၏အကြံအစည်သင်လုပ်ရပ်များဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြ, ပြီးတော့တချို့ရလဒ်တွေကိုလာရသောတချို့ခံစားချက်တွေကိုနှင့်စိတ်ခံစားမှုပေးပါ။ သငျသညျသင်တို့၏အကြံအစည်ပြောင်းလဲသွားလျှင်ဒါ, သင်သည်သင်၏ရလဒ်များကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ဒါဟာနေ့တိုင်းတူညီတဲ့အမှုကိုပြုနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောရလဒ်များကိုမျှော်လင့်ရူးဖြစ်ပါတယ်။ သင်တို့၏အကြံအစည်သင်မည်သူသင့်ရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး၏အခြေစိုက်စခန်းဖြစ်ကြသည်။ သာညစ်ညမ်းစေရန်, ဒါပေမယ့်တပြင်လုံးကိုသင်တို့အဘို့လျှောက်ထားခြင်းမရှိပါ။
တစ်နေ့ကျရင်ငါတစ်ခုသတိထားမိလိုက်တယ်။ ငါ“ yourbrainrebalanced.com” အသိုင်းအဝိုင်းသို့ဝင်သောအခါကျွန်ုပ်၏လက်မှတ်ထဲသို့ကောင်တာတစ်ခုထည့်လိုက်သည်။ ရက်ပေါင်း ၁၀၀ အတွင်း ၀ င်လာတာကိုမြင်ရတော့ငါဟာ ... ဒီလိုလုပ်ဖို့အချိန်ယူရတယ်။ ရက်ပေါင်း ၁၀၀ သည်တစ်နှစ်၏လေးပုံတစ်ပုံကျော်ဖြစ်နေသောကြောင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများနှင့်ဝေးဝေးနေရန်အချိန်များစွာရှိသည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်မှန်ကန်စွာမသိလျှင်၊ ကျွန်ုပ်သည်ဤစိန်ခေါ်မှုကိုဘယ်တော့မှအဆုံးသတ်မည်မဟုတ်ပါ” ။ သင်အမှန်တကယ်လုပ်ဆောင်သည့်အချိန်သည်အချိန်သည်အလွန်မြန်ဆန်ကြောင်း၊ ငါသဘောပေါက်သည်၊ သို့သော်သင်မကျင့်သောအခါ၊ ဤမျှလောက်ကြာကြာပုံရသည်။ ဒီတော့ဟုတ်တယ်၊ ငါအခုချက်ချင်းမရပ်လိုက်ရင်၊ အသက် ၂၀ နီးပါးရှိပြီးပိုကောင်းတဲ့အရာတွေကိုလုပ်ဖို့ငါ့ရှေ့မှာငါ့မှာအချိန်အများကြီးရှိတယ်ဆိုတာကိုငါကြောက်တယ်။ မအောင်မြင်သောဘ ၀ ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေစဉ်ကရရှိခဲ့သောပျော်ရွှင်မှုထက်များစွာကြီးမားသည်။ လှုံ့ဆော်မှုအကြောင်းပြချက်ဖြင့် Tony Robbins မှကျွန်ုပ်သင်ယူခဲ့သောမေးခွန်းနှစ်ခုမှာ“ ဒီစွဲလမ်းမှုကိုငါဆက်လက်ကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်နောက်ကျလိမ့်မည်နည်း” “ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်ဤစွဲလမ်းမှုကိုယခုပင်ရပ်တန့်နေပါကကျွန်ုပ်အတွက်မည်မျှပျော်စရာကောင်းလိမ့်မည်နည်း” ပထမတစ်ခုကစွဲလမ်းမှုမကောင်းသောအပိုင်းကိုအဓိကထားပြီးဒုတိယတစ်ခုကသင့်အားမလုပ်သင့်သောအကြောင်းပြချက်ဖြစ်သည်။ သင်၏ဘဝကိုနောက်အဆင့်သို့ရောက်လိုသောအခါစဉ်းစားရန်အရေးကြီးသောအရာများဖြစ်သည်။
ဤအပိုင်းကိုအတွင်းတစ်ခုမှာနောက်ဆုံးအကြံဉာဏ်ကိုသင့်ရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်၏သွားကြကုန်အံ့မှလေ့လာသင်ယူဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျပစ္စုပ္ပန်အတွက်အသက်ရှင်ရန်ရှိသည်။ သင်မနက်ဖြန်ပြုပါသို့မဟုတ်သင်သည်အဘယ်သို့ပြုလေ၏မနေ့ကနဲ့ပစ္စုပ္ပန်နေဖို့တံ့သောအရာကိုစိုးရိမ်ပူပန်ရန်မလိုအပ်ပါဘူး။ ဒီအမှုအရာပင်အဆိုးဆုံးစေသည်ဖြစ်သောကြောင့်ပင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအပြစ်တင်ဖို့မကြိုးစားပါနှင့်။ သင်သည်အဘယ်သို့ပြု၏သငျသညျ, ကသမိုင်းရဲ့ခဲ့ဘူးသောအရာကိုဖြစ်ခဲ့သည်။ မစိုးရိမ်ပါနဲ့။ သင်တို့အဘို့အရေးသောအရာတို့ကိုပေါ်တွင်ပစ္စုပ္ပန်ပေါ်တွင်သင်၏စိတ်ကိုအာရုံစူးစိုက်ထားပါ။ သငျသညျယခုအချိန်တွင်တှငျနထေိုငျမှတပါးအဘယ်လုပျနိုငျဘာမျှရှိပါသည်။ သင်အလိုရှိကြသည်တွင်အနာဂတ်တွင်ရှိနိုင်ပါသည်ဒါကြောင့်သင်ပစ္စုပ္ပန်လုပျဆောငျသှားရာလမျးပြောင်းလဲပါ။ ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှု porn စွဲသတိထားပါသင်၏အသက်တာအပေါ်ရှိပြီးသာရပ်တန့်ခြင်းဖြင့်သင်လိုချင်ဘဝရဖို့ပါလိမ့်မယ်နားလည်ပါသည်။ သငျသညျပတျဝနျးကငျြသမြှသောအမှုအရာနှင့် ပတ်သက်. သတိ Be သူတို့ကိုပျော်မွေ့!
အခြားသူများနှင့်ချိတ်ဆက် Get နှင့်သူတို့ကိုကူညီ
ငါသည်ငါ့စွဲလမ်းရပ်တန့်ရန်ဆုံးဖြတ်သောအခါ, ငါ web ပေါ်မှာအကူအညီတောင်းကြည့်ဖို့စတင်ခဲ့တယ်။ ငါဆိုဒ်များအများကြီးတွေ့ပေမယ့်ငါ့ကိုကူညီပေးခဲ့သည်သောတဦးတည်းအများဆုံးဖြစ်ခဲ့သည် http://www.yourbrainrebalanced.com/
တစ်ဦးအသိုင်းအဝိုင်းသို့ရယူပါ။ သငျသညျများမှာကဲ့သို့တူညီသောပြဿနာများ share ကြောင့်တခြားသူတွေနဲ့ချိတ်ဆက် Get ။ သင်တို့၏အကြံအစည်, သင့်အတွေ့အကြုံများ, သင့်ပြဿနာများမျှဝေပါ။ အကူအညီရှာပါ။ ကျနော်တို့လူသားမြားသဖြစ်ကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လမ်းကြောင်းကိုအများကြီးပိုမိုလွယ်ကူစေရန်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားကနေသင်ယူနိုင်ပါတယ်။ သင်ကအသစ်တဖန်ပြန်လည်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။ ရုံပြီးသားအရာကိုအယူပါ။ ဒါကြောင့်ကြိုးစားပါနှင့်သင်ကိုက်ညီသို့မဟုတ်မပါလျှင်ကြည့်ပါ။ ရှိပြီးသားအလုပ်မလုပ်ပါဘူးဟုပြောသည်ရဲ့ဘယ်သို့လျှင်ထိုအခါသင်သည်သစ်ကိုတစ်ခုခုသွားနိုင်ပါတယ်။
သင်တို့မူကားအကူအညီရရန်သာရှိပါသည်။ သငျသညျအခြားသူတွေကိုကူညီရှိလည်းဖြစ်ကြသည်။ အကျိုးစီးပွား, သင်သည်သင်၏အသဘောထားအမြင်နှင့်အားပေးသို့မဟုတ်သင်သည်သင်၏အတွေ့အကြုံကနေသင်ယူသောအရာကို share ကြောင်းဘလော့ဂ်များနှင့်အကြောင်းအရာများအတွက်ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပါဝငျသညျ။ ဒါဟာကိုယ့်ကိုယ်ကို Self-လေးစားမှုနှင့်ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ကြမည်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့အတွေ့အကြုံကနေစကားပြောနှင့်သင်သည်သင်၏အကြံပေးချက်ကိုတစ်စုံတစ်ယောက်ကူညီပေးမည်ကိုသိသောကြောင့်သင်သည်အထောက်အကူဖြစ်ခြင်း၏ခံစားချက်အားငါပေးမည်ဖြစ်သောကြောင့်သင်သည်ထားပြီးစွဲအရှုံးမပေးကဲ့သို့သင်တို့ခံစားရစေပါလိမ့်မယ်။
သင်အသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုထဲသို့ ၀ င်ရောက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်သင်ပြီးမြောက်လိုသည့်အရာကိုလုပ်ဆောင်ပြီးသောသေချာသည့်သုံးစွဲသူများရှိနိုင်သည်။ သူတို့ရဲ့ပုံပြင်တွေကိုဖတ်ပါ။ မည်သည့်ပြproblemsနာများကြုံတွေ့ရပြီး၎င်းတို့မည်သို့အောင်မြင်စွာဖြတ်သန်းသွားသည်ကိုကြည့်ပါ။ သူတို့၏အတွေ့အကြုံမှသင်ယူပြီးအကြံဥာဏ်များရယူပါ။
အခြားသူများကိုဆက်ခံကိုမြင်လျှင်လှုံ့ဆော်မှုငါ့ကိုစောင့်ဘဲငါ့ကိုညှနျကွားခ၏အသိပေးရမည်။ အခြားသူတွေကလုပျနိုငျပါလျှင်ငါလည်းလုပ်နိုင်, သိသည်။
သင်လှုံ့ဆော်မှုနေဖို့ကူညီပေးဖို့လုပျနိုငျတစျခုအရာသည်သင်၏တိုးတက်မှု၏ခြေရာခံစောင့်ရှောက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့ off-pmo ရက်ပေါင်းရေတွက်လျှင်, သငျသညျတဖနျ relapsing ထက်စိန်ခေါ်မှုဆက်ခံအပေါ်ပိုပြီးအာရုံစူးစိုက်ဖြစ်ကူညီပေးပါမည်တဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတကယ်တော့ပါပဲ။ သင်အလိုရှိပါလျှင်ငါ၏အကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ငါနီးကပ်လာလာနှင့်ငါ့ရည်မှန်းချက်နီးကပ်လာသည်ကိုသိမြင်လျှင်ငါ့ကိုပွညျ့စုံ, စိတ်ကျေနပ်မှုတစ်ခုအသိကိုပေးတော်မူ၏။ ဒါနဲ့စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်စေအကြံပြုအပ်ပါသည်။ သင်ပထမဦးဆုံးသေးငယ်တဲ့ခြေလှမ်းများ, 14 ရက်, 21 ရက်ပေါင်း, ပြီးတော့အထက်နှင့်အထက်၌အောင်, ဒါပေမယ့်သင်အမှန်တကယ်ရပ်တန့်နဲ့တူခံစားမိလျှင်မူကား, က start ကနေ 100 ရက်ပေါင်းတစ်ပစ်မှတ်ထားနိုင်ပါတယ်။
ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်ပြုခြင်းနှင့်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသို့ယူဖို့လိုအပ်နိုင်ပါတယ်အရေးကြီးဆုံးအရာတစျခုဖွစျသညျအပေါ်သင်တို့၏အကြံအစည်နှင့်အတူနေ့စဉ်ဂျာနယ် Keeping ။ အခြားသူတွေကိုသင်ကူညီရန်ကြိုးစားသငျသညျအားပေးသို့မဟုတ်သင်တုံ့ပြန်ချက်ပေး, သင်မူကားကိုလည်းပိုမိုလွယ်ကူစွာသင့်ရဲ့တိုးတက်မှု, သင့်အမှားနှင့်သင့်တိုးတက်မှုမြင်နိုင်ပါသည်လိမ့်မယ်မသာ။
ငါ၏အဆုံးစွန်ထောက်ခံချက်အအေးမိရေချိုးခန်းဖြစ်ပါတယ်။ အလွန်ထိရောက်သောသင် porn စဉ်းစားရပ်တန့်နိုင်ဘူးကဲ့သို့သင်တို့ခံစားရသည့်အခါ။ တဦးတည်းအားဖြင့်သင်တို့ကိုမကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုခုဖြစ်ပျက်သွားတူခံစားအခါတိုင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုအပြစ်ပေး။ သို့သော်စိတ်ကိုထား, သင်ရမ္မက်ဖြေရှင်းပေးမယ့်အမြန်နည်းလမ်းအဖြစ်အအေးရေချိုးခန်းထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ပေမယ့်ရေတိုရေရှည်ဖြေရှင်းချက်ပါပဲ။
နှင့်သင်တန်း၏ငါအဆုံးစွန်အကွံဉာဏျအကြောင်းကိုနောက်နေခဲ့သည်။ အဆုံးစွန်အကွံဉာဏျနဲ့တူမျှထိုကဲ့သို့သောအရာရှိပါသည်။ အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ ဒီမျှမှော်ဆေးလုံးရှိပါသည်။ သည်းခံခြင်းနဲ့ Self-စည်းကမ်းသာ။
လေ့လာမှုအသစ် online အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းသုံးစွဲမှုသည်လူငယ်များတွင်အော့ဖ်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာချို့ယွင်းမှုနှင့်ဆက်စပ်နေသလား။ ဘက်စုံသုံး ... t.co/VMluqtzXaG
09 / 15 / 2021
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစွဲလမ်းမှုနှင့်နေထိုင်ခြင်းသည်မျှော်လင့်ချက်မဲ့အထီးကျန်နေရာတစ်ခုကဲ့သို့ခံစားနိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်အဲဒါဖြစ်စရာမလိုပါဘူး။ r နဲ့… t.co/6Q4Q5RaioU
Porn ပေါ်တွင်သင်၏ ဦး နှောက်အားဖြင့် Retweeted